Nezvedu - Beijing JCZ Technology Co., Ltd.
Beijing JCZ Technology Co., Ltd. inozivikanwa seJCZ yakavambwa muna 2004. Iyo inozivikanwa bhizinesi repamhepo, rakazvipira kune laser danda kuendesa uye kutonga zvine chekuita nekutsvaga, kusimudzira, kugadzira, uye kusangana. Kunze kwezvigadzirwa zvaro zvepakati EZCAD laser control system, iri panzvimbo inotungamira mumusika muChina nekune dzimwe nyika, JCZ iri kugadzira nekuparadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvine chekuita nemalaser uye mhinduro kune epasirese laser system inosanganisa senge laser software, laser controller, laser galvo scanner, laser source, laser optics ... Kusvikira gore ra2019, taive nenhengo zana nemakumi masere nesere, uye vanopfuura makumi masere muzana vaive mahunyanzvi vane ruzivo vachishanda muR & D nedhipatimendi rekutsigira tekinoroji, vachipa zvigadzirwa zvakavimbika uye inoteerera rutsigiro rwehunyanzvi.
Nemaitiro edu ekutanga-kirasi ekugadzira uye yakasimba kudzora mhando panguva yese yekugadzira maitiro, zvigadzirwa zvese zvakasvika kuhofisi yevatengi vedu zvinenge zvisina kukwana zero. Chigadzirwa chimwe nechimwe chine zvido zvaro zvekuongorora, chete chigadzirwa chakagadzirwa neJCZ, asi izvo zvinogadzirwa nevatinoshanda navo zvakare.
MuJCZ, vanopfuura makumi mashanu muzana evashandi vari kushanda muR & D department. Isu tine timu yehunyanzvi magetsi, mechnical, uye software mainjiniya uye takaisa mari mumakambani mazhinji anozivikanwa emalaser, ayo anotigonesa kupa mhinduro yakakwana yeindasitiri laser yekugadzirisa munda mukati menguva pfupi.
Neboka redu reruzivo rehunyanzvi, inoteerera rutsigiro rwepamhepo runogona kupihwa kubva ku8: 00 Am kusvika 11: 00 Pm UTC + 8 nguva kubva Muvhuro kusvika Svondo. Maawa makumi maviri nemana ekutsigirwa pamhepo zvinozogoneka mushure mekunge hofisi yeJCZ US yagadzwa munguva pfupi iri kutevera. Zvakare, mainjiniya edu ane Visa-kwenguva refu Visa yenyika dziri muEurope, Aisa, uye North America. Pa-saiti rutsigiro zvakare zvinogoneka.
Zvigadzirwa zveJCZ zviri panzvimbo inotungamira mumusika, kunyanya kumaka laser, uye huwandu hwakawanda hwenzvimbo dzeraser (zviuru makumi mashanu +) zvinotengeswa gore rega rega. Kubva pane izvi, kune izvo zvigadzirwa zvatakaburitsa, yedu yekugadzira mutengo iri padanho repasi, uye kune avo vanopihwa nemumwe wedu, tinowana mutengo wakanyanya nerutsigiro. Naizvozvo, mutengo unokwikwidza kwazvo unogona kupihwa neJCZ.
R&D NOKUTSIGIRA VAINJINI
Takatanga kushandira pamwe neJCZ muna 2005. Yaive kambani diki kwazvo panguva iyoyo, yaingotenderedza vanhu gumi. Iye zvino JCZ ndeimwe yemakambani ane mukurumbira mumunda we laser, kunyanya yekumaka laser.
- Peter Perrett, Laser system inosanganisa yakavakirwa muUK.
Kwete sevamwe vatengesi veChinese, isu tiri kuchengeta hukama hwepedyo chaizvo neJCZ timu yepasi rese, kutengesa, R&D, uye mainjiniya ekutsigira. Takasangana nemwedzi miviri yekudzidziswa, mapurojekiti matsva, uye kunwa.
- Mr. Kim, Muvambi weKorea laser system kambani
Wese munhu muJCZ ndinoziva akatendeseka chaizvo uye anogara achiisa kufarira kwevatengi pakutanga. Ndiri kuita bhizinesi neJCZ timu yepasi rese kweanoda kusvika makore gumi ikozvino.
- Mr. Lee, CTO yeimwe Korea laser system kambani
EZCAD yakanaka software ine masimba masimba uye mushandisi-inoshamwaridzika interface. Uye timu yekutsigira inogara ichibatsira. Ini ndinongomhan'arira nyaya yangu yehunyanzvi kwavari, ivo vanogadzirisa mukati menguva pfupi.
- Josef Sully, mushandisi weEZCAD anogara kuGerman.
Munguva yakapfuura, ndakatenga macontroller kubva kuJCZ uye zvimwe zvikamu kubva kune vamwe vatengesi. Asi ikozvino, JCZ ndiyo yangu yega yekutengesa michina yemalaser, inova inodhura-inoshanda. Chikurukuru, vanozoedza zvese zvikamu nguva imwe nguva vasati vatumira kuti vave nechokwadi chekuti hapana hurema kana zvasvika kuhofisi yedu.
- Vadim Levkov, MuRussia laser system inosanganisa.
Kuchengetedza zvakavanzika zvevatengi vedu, zita ratakashandisa nderechokwadi.